हास्य वन्यजीव फोटोग्राफी २०१ for को लागी प्रतियोगीहरु खुलासा गरिएको छ - Print Peppermint
कमेडी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी २०१ for का लागि उम्मेदवारहरूले खुलासा गरे
सेप्टेम्बर 25, 2019 | डिजाइन हास्य
यद्यपि तिनीहरूको सबैभन्दा अनौंठो क्षणमा, त्यहाँ a० प्रतिशत सम्भावना छ कि जनावरहरू कुनै असुरक्षित र हाँसउठ्दो-हेर्दै केही गर्नको लागि केही सेकेन्ड टाढा छन्। यो हामी किन उनीहरूलाई माया गर्छौं धेरै कारणहरु मध्ये एक हो। तर, पक्कै पनि, यो एक कारण यो छ कि किन मानिसहरू आफैंले रमाइलो गर्छन्। यो २०१ is हो, कमेडी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीको नयाँ सेटले कब्जा गरेको रमाईलो जनावरहरूको छविहरूको न्याय गर्न लागेको छ। यी तस्विरहरू हेर्न उत्सुक हुनुहोस्, त्यसपछि पढिरहनुहोस्।
CWPA वा कमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पुरस्कार एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो। संसारभरिबाट जनावरहरूको रमाईलो तस्वीरहरू एउटा पुस्तकमा भेला भएको हुनुपर्छ जुन पशु कट्टरपन्थीहरूको लागि आदर्श हो। जब यस पुरस्कारले wackiest पशु फोटोग्राफी को लागी एक प्रतियोगिता को घोषणा गर्‍यो, तब तिनीहरुले संसारको सबै कुना बाट सयौं प्रविष्टिहरु प्राप्त गरे। विश्वव्यापी र न्युबी फोटोग्राफरहरूद्वारा लिइएको सबैभन्दा मनोरन्जनकारी र सिलिएस्ट क्षणहरूको लागि पुरस्कार दिन यो वार्षिक पुरस्कार हो किनभने उनीहरूले उनीहरूको कागजातको लागि उत्तम प्रदर्शन गर्छन्। पोइन्ट र शुट भनेको विषयको पूर्ण विस्तृत रूपमा क्याप्चर गर्न यी सिलिस्ट छविहरू क्याप्चर गर्ने प्रविधि हो।
वार्षिक कमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धीहरूले खुलासा गरे। निम्नलिखित धेरै उम्मेद्वारहरु मध्ये केहि छ। त्यसोभए, यसमा हेरौं:
उहाँ दाहिने पछाडि हुनुहुन्छ, हैन
यो CWPA पुरस्कार को एक दावेदार हो। एन्थोनी एन पेट्रोविचले छवि सबमिट गर्नुभयो। यो सानो मान्छे कल्पना गर्नुहोस् र अर्को मिनेट को लागी हाँस्नुहोस्। छवि हेर्न क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै जोखिममा पछ्याउनुहोस्
यो जीवन क्षण चित्रको टुक्रा हो जुन तिलकराज नागराजले लिएका थिए। गेंडा एक प्यारा चरा मा peeing गरिरहेको छ रूपमा यो प्रफुल्लितकारी छ। यसले दर्शकहरूलाई मुस्कान ल्याउन असफल हुने छैन। तिम्रो के बिचार छ?
सायद तपाईलाई कुनै प्रकारको तस्बिर चाहिएको छ जुन पोटी-हास्यास्पद किस्माहरू भन्दा कम हो? त्यसोभए, यो तस्वीरलाई डोना बोर्डन द्वारा HI भनिन्छ। सबैले एक ओटर मान्छे जस्तो अभिनयको बारेमा सुन्न प्राप्त गर्दछन्। के त्यो छवि रमाईलो छैन?
BFF वा बोर्न फ्री फाउन्डेशनको साथ, विश्वव्यापी वन्यजीव दान, प्रतिस्पर्धा संरक्षण बानी को समर्थन गर्न प्रयोग गरीएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछ, यदि उनीहरूले अन्य फाइनलिस्टका छविहरू हेर्न चाहेको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गरे, ती चित्रहरूमा हेराई गर्नुको सट्टा, हामीले एउटा भिडियो खिचेका छौं, प्याज इंक यस बिन्दुमा प्रतिलिपि अधिकार अधिवक्ताहरू बीच रहेको तथ्यले गर्दा। , र हामी मुद्दा हाल्न चाहँदैनौं। यद्यपि, कहिले पनि चिन्ता नगर्नुहोस् तल गिलहरीको तस्बिर हो जुन निरालो अनुहार बनाउँदैछ! तपाईं यो तस्वीरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के यो साँच्चै हास्यास्पद छ?
त्यहाँ चालीस भन्दा बढी उम्मेद्वारहरू छन् (यदि तपाईंसँग समय छ भने उनीहरूलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ) त्यसोभए खुशी हुनुहोस् कि पक्कै पनि भविष्यको तस्विरहरू जम्मा गर्ने नै छ, “ह्यांग इन।
जब तपाई उपहारको खोजी खोज्दै हुनुहुन्छ रुबिक क्यूबको बारेमा सोच्नुहोस्। अनलाइन रुबिकको घन समाधान गर्ने समाधानको माध्यमबाट तपाईलाई मार्गदर्शन गर्दछ।
← कलरप्लान पेपर समीक्षा
स्थानीय कलाकार 5iveFingaz रिबोक र डिक खेलकुद सामानको बिरूद्ध एक केस फाइल गर्छन् उनको डिजाईन रिपिंगका लागि →